“2016 Buddha Gaya Hotel Trip “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Travel » “2016 Buddha Gaya Hotel Trip “	0
“2016 Buddha Gaya Hotel Trip “
အတွက် Wings ခရီးသွားလုပ်ငန်းမှ မြေမြတ်မဟာ ဗုဒ္ဓဂါယာ ဘုရားဖူး ဟိုတယ်တည်း🏨🏨🏨
” ဗုဒ္ဓဂါယာ ဟိုတယ် (၇ညအိပ်၈ရက်)ခရီးစဉ် ”
ခရီးစဉ်နေ့ရက်များ 📆 Oct 14 ~ 21
📅 Nov 16 ~ 23
📆 Dec 23~ 30
ခရီးစဉ်ကုန်ကျစရိတ် =💲USD 1100 ( per pax)
(16paxs >> 1 pax FOC)
ယခုနှစ် ခရီးသွားရာသီအစဖြစ်သော အောက်တိုဘာလ သီတင်းကျွတ်အခါသမယတွင် ယခင်နှစ် ခရီးစဉ်များနှင့်မတူ ဟိုတယ်တည်းခရီးစဉ်လေးများဖြင့် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်..
ဗုဒ္ဓဂယာခရီးစဉ်သည် ခရီးဝေးဘုရားဖူးခရီးစဉ်ဖြစ်သောကြောင့် ခရီးစဉ်တလျှောက်
ရန် ကောင်းမွန်သော 🏨ဟိုတယ်များ၌သာ တည်းခိုပြီး သွားလာရာတွင်လည်း အဆင့်မြင့် 🚌 Air-Con Coach များသာ စီစဉ်ထားပေးပါတယ်ရှင်….
🍛🍹အစားအသောက်အနေနှင့်ကတော့ ရောက်ရှိရာဟိုတယ်၌သာ ဘူဖေးအစားအသောက်များစီစဉ်ထားရှိပေးထားပါတယ် ….
ဘုရားသမိုင်းများအား နားလည်စေရန်Ph.D. ဆရာတော်တစ်ပါးမှ လိုက်လံရှင်းပြပေးမည်ဖြစ်ပြီး
ဝန်ဆောင်မှု အနေနဲ့ကတော့ Wings မှ နွေးထွေးပျုငှာသော Tour Leader တစ်ဦးနှင့် အတူ Local Guide တစ်ဦးလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်….
မြေမြတ်မဟာ ဗုဒ္ဓဂယာဘုရားဖူးခရီးစဉ်လေးဖူးရန် ဆန္ဒ ရှိပါက Wings ခရီးသွားကုမ္ပဏီလေးမှ တာဝန်ယူပါရစေရှင်…..
မဟာဗောဒိစေတီနှင့် သတ္တဌာန ၇ ဌာန
🍁မြတ်စွာဘုရားအား ဗိမ္ဗိသာရမင်းကြီးမှ လှူဒါန်းခဲ့သော ဝေဠုဝန်ကျောင်းတော်ရာ၊
🍁၁၂ ရာစုနှစ်များအတွင်း မီးရှို့ဖျတ်ဆီးခြင်း
🍁မြတ်စွာဘုရား ပရိနိဗ္ဗာန် စံရာနေရာဖြစ်သော ကုသိနာရုံ
အနာထပိဏ် သူဌေးကြီးမှ ၅၄ကုဋေ တိတိ
🍁မြတ်စွာဘုရား ပဉ္စဝဂ္ဂီ ၅ဦးတို့အား
🍁ဃနာနို့ဆွမ်းကပ်ရာ သုဇာတာသူဌေးမနေအိမ်နှင့် ဆွမ်းကပ်သောနေရာ
🍁၆နှစ်တိုင်တိုင် ဒုက္ကရစရိယာ ကျင့်ခဲ့သည့်
စသည့်ဌာနအစုံအား Wings မှမိသားစု
အိန္ဒိယ,နီပေါ 👍🏻ဗီဇာကြေး ပါအပြီး
🙋🏻Tour leader အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နဲ့အတူ မိမိအသုံးစရိတ်မှလွဲ၍ခရီးစဉ်အစအဆုံး အပိုကြေး ပေးရန်မလိုပါ
ရာသီစာအသီးအနှံ ၊ ကော်ဖီ၊အအေး ၊သရေစာမုန့်
🚎ညအိပ်ကားစီး ခရီးစဉ် လုံးဝမရှိပါ။
မိသားစုအသင်းအဖွဲ့ သီးသန့်ခရီး များနှင့် ရက်တို hotel အထူး ခရီးစဉ်များဖြစ်သော
၅ည/၆ရက် အထူးခရီးစဉ်များ👨‍👩‍👦‍👦( ဖွားပွင့်ဟောစံ )
ပေးခြင်း နှင့် သက်ဆိုင်ရာလေဆိပ်သို့ ကား
” Wings စေတနာ များသူငါကို ပို့ဆောင်ခရီး
အစဉ် ပြီးသည် ကြည်နူးပီတိ ဖြစ်ပါစေ ”
📲09 782220 683
( Trip plan အသေးစိတ်လေးသိရှိလိုပါက wings မှ လူကိုယ်တိုင်လာရောက်ရှင်းပြပေးမည်ဖြစ်ပြီး Email , Viber မှ တဆင့်လည်းပို့ပေး မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် )
🙏. WINGS 🙏